LEGO Technic Black Friday သဘောတူညီချက်များ ၂၀၂၁ Brick Fanatics
LEGO Technic Black Friday သည် ၂၀၂၁ တွင်သဘောတူညီသည်
ရွက်ကြွေ Lego အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဂီယာခေါင်းများသည် စိတ်လှုပ်ရှားရန် အကြောင်းပြချက်များစွာ ရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ Black ကသောကြာနေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် Lego နည်းပညာ အံ့သြဖွယ်အထူးလျှော့စျေးများကိုခံစားသည်။
နောက်ဆုံးထွက် LEGO Technic Black Friday လျှော့စျေး
များများရှိပါတယ် နည်းပညာ discounts on, Zavvi UK, USA and Australia at the moment. We’ve gathered all of the most recent Black ကသောကြာနေ့ နေ့တိုင်း အပ်ဒိတ်များဖြင့် ဤနေရာတွင် လျှော့စျေးများ။
42131 Cat® D11T ဘူဒိုဇာ - ယခု£ 419.99, £ 359.99 ဖြစ်ခဲ့သည်42083 Bugatti Chiron - ယခု£ 329.99, £ 214.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၄၂၁၂၃ McLaren Senna GTR - ယခု£ 44.99, £ 31.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
၄၂၁၂၂ Jeep Wrangler - ယခု£ 44.99, £ 31.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42111 Dom ရဲ့ Dodge အားသွင်း - ယခု£ 89.99, £ 59.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
42128 အကြီးစား - Tow Truck ကား - ယခု£ 139.99, £ 104.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
42131 Cat D11T ဘူဒိုဇာ - ယခု£ 419.99, £ 329.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42106 တန့်ပြရန် Truck & စက်ဘီး - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
42107 Ducati Panigale - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
42109 App-Controlled ထိပ်တန်း Gear ပြိုင်ပွဲကား - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
၄၂၁၀၅ Catamaran - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
42103 Dragster - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
42083 Bugatti Chiron - သည် A$599.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$434.99 ဖြစ်သည်။
LEGO Technic Black Friday လျှော့စျေး
မင်းအခုလောလောဆယ်စျေးကွက်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ရှိသီးနှံတွေထဲကတစ်ခုခုကိုမင်းရှာတွေ့ဖို့လိုလိမ့်မယ် Lego နည်းပညာ အစုံ။ တစ်ခုလိုချင် Lego နည်းပညာ Porsche လား။ သေချာတဲ့အရာ။ တစ် ဦး Lego နည်းပညာ Lamborghini လား? ပြဿနာမရှိပါဘူး။ လိုင်စင်ရကားများကိုaဖြင့်ပခုံးတွန့်နိုင်သည် Lego နည်းပညာ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်း, Lego နည်းပညာ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (သို့) Lego နည်းပညာ ကရိန်း၊ အားလုံး ဖြတ်ပြီး ဖမ်းဖို့ အဆင်သင့် Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
လူတိုင်းအတွက်တစ်စုံတစ်ရာအမှန်တကယ်ရှိသည်၊ မကြာသေးမီကထုတ်ဝေမှုများကဲ့သို့နေစဉ် 42128 အကြီးစား - Tow Truck ကား နှင့် ၄၂၁၂၉ ၄ × ၄ Mercedes-Benz Zetros Trial Truck များသည်ကြီးမားသောလျှော့စျေးများကိုမြင်နိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့အဟောင်းများကိုအခိုင်အမာရရှိသည်။ 42095 အဝေးထိန်းစတန့်ပြိုင်သူ နှင့် 420994×4X-treme Off-Roader နှစ်ခုစလုံးသည် ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။
LEGO Technic Lamborghini Black Friday အပေးအယူ
42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇ အနည်းဆုံး 2023 နှစ်ကုန်အထိ စင်ပေါ်၌ ချိတ်ဆွဲထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အပြောင်းအလဲလုပ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် ၎င်း၏လက်ရှိအငြိမ်းစားယူသည့်ရက်စွဲဖြင့် အနည်းဆုံးသွားရမည်- သို့သော် ၎င်းသည် သိသိသာသာလျှော့စျေးများကို ခံစားရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဟု မဆိုလိုပါ။ Black ကသောကြာနေ့. အဲဒါက တတိယပတဆင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။arty လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ ၎င်းအား ၂၅% အထိတိုက်ရိုက်ရနိုင်သော၊ ၎င်းမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ရနိုင်သည် LEGO.com.
တရားဝင်ချန်နယ်တွေကနေ မရောင်းရရင်တောင်၊ Black ကသောကြာနေ့ ဖမ်းဆုပ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ 42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇မရ။ £ ၃၄၉.၉၉ / ၃၇၉.၉၉ / € ၃၇၉.၉၉ တွင်၎င်းသည်စျေးဝယ်ပိတ်ရက်များတွင်မည်သည့်လက်ဆောင်များနှင့်မဆိုလွယ်လွယ်ကူကူရသင့်သည်။ Lego VIP အမှတ်များပြန်ပေးသည်။
LEGO Technic Land Rover Black Friday အပေးအယူ
၄၂၁၁၀ Land Rover Defender အလွန်လူကြိုက်များသက်သေပြခဲ့သည် Lego နည်းပညာ ပရိသတ်တွေက ဖမ်းဆုပ်ဖို့ စောင့်နေတုန်းဆိုရင်၊ Black ကသောကြာနေ့ ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည်။ £159.99 / $199.99 / €179.99 ဖြင့် အလေးချိန်ရှိသော ဤ 2,573 အပိုင်းပိုင်းရှိသော ဘီလူးသည် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် လေးလံသောနေရာတွင် ပိတ်မိရန် အခွင့်အရေးပေးသည် နည်းပညာ ဆောင်ပုဒ်၏အထင်ကရကားများ (သို့) စူပါကားများထဲမှပေါ်ထွက်လာစရာမလိုဘဲတည်ဆောက်ပါ။
LEGO Technic ကား Black Friday အပေးအယူများ
Lambo နှင့် Land Rover တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါ Lego နည်းပညာ ယခုလက်ရှိရနိုင်သောကားများ LEGO.com တတိယ-party လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ သို့သော်၎င်းသည်ဝေးသည်။ ကနေ 42083 Bugatti Chiron နှင့် 42096 Porsche 911 RSR သို့ ၄၂၁၂၃ McLaren Senna GTR နှင့် 42125 Ferrari 488 GTE AF Corse # 51အများကြီး၊ Lego နည်းပညာ တန်းစီဇယားနှင့်စျေးနှုန်းအမှတ်အသားများကို ဖြတ်၍ ကားများကကြီးစိုးနေသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ လက်ရှိအစုစုရှိလူတိုင်းအတွက် အမှန်တကယ် တစ်ခုခုရှိပြီး ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ရန် များစွာရှိနေပါသည်။ Black ကသောကြာနေ့ - လျှော့စျေးများကို အခွင့်ကောင်းယူရန် သို့မဟုတ် လက်ဆောင်များဝယ်ယူခြင်းဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မီရန်။
LEGO Technic Black Friday အနားယူခြင်းအစုံ
ကြီးကြီးမားမားတွေရှိတယ် Lego နည်းပညာ အစုံ ထွက်ခွာarting စင်ပေါ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အပါအဝင် 42083 Bugatti Chiron နှင့် 42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော်မရ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းအတွက်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည် Lego အဖွဲ့သည်စာရိုက်နိုင်သည့်၎င်း၏အနားယူအငြိမ်းစားလက်ကျန်များကိုရှင်းပစ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါအချို့ကအလွန်ရက်ရောသောလျှော့စျေးများကိုပေးသည် Lego နည်းပညာ ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်စျေးဆစ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်, 42108 မိုဘိုင်းချီစက်, 42109 App-Controlled ထိပ်တန်း Gear ပြိုင်ပွဲကား နှင့် 42112 ကွန်ကရစ်ရောနှောထရပ်ကား အားလုံးအတူရောနှောပါဝင်နိုင်တယ် 42090 ထွက်ပြေးဖို့ Truck ကား, 42095 အဝေးထိန်းစတန့်ပြိုင်သူ နှင့် 420994×4X-treme Off-Roader ဖြစ်သည်မရ။ ပြီးတော့အဲဒီ့အစုံတွေကို ၀ ယ်ဖို့မင်းရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကအဲဒါတွေကိုယူဖို့အမြတ်အရှိဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ လူအပေါင်းတို့သည်ထွက်စစ်ဆေးရန် Lego Black ကသောကြာနေ့ 2021 တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရမည့်အပေးအယူများ နှင့် နောက်ဆုံးပေါ်အရာအားလုံးတွင် နောက်ဆုံးပေါ်ရှိနေစေရန် ဤစာမျက်နှာကို မှတ်သားပါ Lego နည်းပညာ လျှော့စျေးနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုသူတို့ကြေငြာသည့်အခါနှင့်အမျှပေးသည်။